သူများလယ်ကွက်ထဲက တဲလေးမှာနေရပြီး တစ်ယောက်ထဲ ကယ်သူမဲ့နေတဲ့ ရောဂါသည်တစ်ဦးကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဘုန်းဘုန်း – Media Sharing
တောင်ငူမြို့ကံရိုးကျေးရွာ သူတစ်ပါးလယ်ကွက်ထဲမှာ အမြင်မတော်သူတွေက ဆောက်ပေးထားတဲ့ တဲဟုခေါ်ရုံနေရာလေးထဲက ဆွေမျိုးကင်းမဲ့ အတက်ရောဂါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လဲလုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းမပြုနိင်တဲ့ ကိုဇင်မင်း ဆိုသော လူတစ်ယောက်။
အမြင်မတော်သူတွေအကူအညီတောင်းလို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး တကယ်လဲ အတက်ရောဂါ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားနေရပြီး ဒုက္ခရောက်နေတာမြင်တော့ တောင်ငူဆေးရုံကြီးကိုတင်ပို့ပေးပြီး ကိုယ်တိုင် လိုအပ်တာလှုဒါန်းပေး၊စေတနာရှင်တချို့ဝိုင်းဝန်းလှုဒါန်းပေးရင်း ဆေးကုသစေခဲ့တာ ခုဆို (4)ရက်ရှိခဲ့ပြီပေါ့။
ဒီနေ့လဲ တခြားအလုပ်တွေကြားက မဖြစ်ဖြစ်အောင်တောင်ငူဆေးရုံအရောက်သွား ဆေးဖိုးနဲ့လိုအပ်ရာအတွက် အလှုငွေ(30000)လှုဒါန်းပေးရင်း ရောဂါအခြေအနေကို မေးကြည့်တော့ CT scan တွေ Ultrasound အဖြေတွေအရတော့ ရောဂါက အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီမို့ ဦးနှောက်သွေးကြောတချို့ပိတ်နေတာတွေကြောင့် နာတာရှည်လဲဖြစ်နိင်သလို မျှော်လင့်ချက်လဲ နည်းနိင်တဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့။အတက်ရောဂါကလဲ နောက်ပိုင်း တရစပ် အတက်မကျတာမျိုးတွေပါဖြစ်ဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေ။
ဒါနဲ့ ဖြစ်နိင်ရင် သူ့ရဲ့ခိုနားရာ တဲအိမ်လေးကို ပြန်ပို့ပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ Oxygen ပေးတာတွေ၊အဟာရအတွက်လှုဒါန်းတာတွေဆက်လုပ်ပေးရင်း ကူညီဖို့ စတင်အကူအညီတောင်းခံခဲ့သူကတဆင့် ဆွေးနွေးကြည့်တော့ သူနေထိုင်ခဲ့ရာ တဲလေးကို ဒီနေ့သန့်ရှင်းရေးလေးသွားလုပ်ပေးနေရင်း လယ်ကွက်ပိုင်ရှင်က ထပ်မထားနိင်တော့ကြောင်းးး တဲ့ကိုဖျက်လိုက်ဖို့အကြောင်းးးပြောလာတယ် ဆိုတော့ ??????
ကိုဇင်မင်း ရဲ့ကံကြမ္မာ ဘယ်လိုများထပ်ဖြစ်လာဦးမလဲ?အတိတ်ကံကြောင့်ပဲလားးး?ကံကြမ္မာရယ် ငြှိုးရက်လေသလားးးး? လောကကြီးထဲ လူသားတစ်ယောက်ရှင်သန်ဖို့ အတတ်နိင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပေမယ့် ကံတရားးးက မျက်နှာသာမပေးသလိုအဖြစ် ! ဖြစ်နိင်သမျှတော့ ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေးကူညီမှုအသင်း အနေနဲ့ကူညီပေးနေဦးမှာပါ။ တကယ်ဆိုးရွားတဲ့ ဘဝအခြေအနေတွေ လောကထဲရှိနေခဲ့တာတွေ မြင်တွေ့ရလေ ကိုယ့်အတွက်တော့ ကုသိုလ်တရားးတွေပိုမိုလုပ်ဆောင်ဖို့ တွန်းအားးးတွေဖြစ်လေပဲလို့ သတိသံဝေဂလေးးတွေနဲ့ !!!!
ကံကောင်းတဲ့ အလှည့်လေး ကိုဇင်မင်းအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာနိင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးနေမိပါတယ်။ ခုဘဝ ဘာမှ မတော်စပ်ပေမယ့် သံသရာမှာတော့ မတော်စပ်ဘူးတဲ့ ဆွေမျိုးဆိုတာမရှိနိင်ဘူးးးးးတဲ့လေ။
ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေးကူညီမှုအသင်း နှင့် ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေး
တောငျငူမွို့ကံရိုးကြေးရှာ သူတဈပါးလယျကှကျထဲမှာ အမွငျမတျောသူတှကေ ဆောကျပေးထားတဲ့ တဲဟုချေါရုံနရောလေးထဲက ဆှမြေိုးကငျးမဲ့ အတကျရောဂါကွောငျ့ ကိုယျတိုငျလဲလုပျကိုငျစားသောကျခွငျးမပွုနိငျတဲ့ ကိုဇငျမငျး ဆိုသော လူတဈယောကျ။
အမွငျမတျောသူတှအေကူအညီတောငျးလို့ ကိုယျတိုငျသှားရောကျကွညျ့ရှုပွီး တကယျလဲ အတကျရောဂါ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားနရေပွီး ဒုက်ခရောကျနတောမွငျတော့ တောငျငူဆေးရုံကွီးကိုတငျပို့ပေးပွီး ကိုယျတိုငျ လိုအပျတာလှုဒါနျးပေး၊စတေနာရှငျတခြို့ဝိုငျးဝနျးလှုဒါနျးပေးရငျး ဆေးကုသစခေဲ့တာ ခုဆို (4)ရကျရှိခဲ့ပွီပေါ့။
ဒီနလေဲ့ တခွားအလုပျတှကွေားက မဖွဈဖွဈအောငျတောငျငူဆေးရုံအရောကျသှား ဆေးဖိုးနဲ့လိုအပျရာအတှကျ အလှုငှေ(30000)လှုဒါနျးပေးရငျး ရောဂါအခွအေနကေို မေးကွညျ့တော့ CT scan တှေ Ultrasound အဖွတှေအေရတော့ ရောဂါက အခြိနျကွာမွငျ့ခဲ့ပွီမို့ ဦးနှောကျသှေးကွောတခြို့ပိတျနတောတှကွေောငျ့ နာတာရှညျလဲဖွဈနိငျသလို မြှျောလငျ့ခကျြလဲ နညျးနိငျတဲ့အဖွဈမြိုးပေါ့။အတကျရောဂါကလဲ နောကျပိုငျး တရစပျ အတကျမကတြာမြိုးတှပေါဖွဈဖွဈလာနတေဲ့အခွအေနေ။
ဒါနဲ့ ဖွဈနိငျရငျ သူ့ရဲ့ခိုနားရာ တဲအိမျလေးကို ပွနျပို့ပေးပွီး လိုအပျတဲ့ Oxygen ပေးတာတှေ၊အဟာရအတှကျလှုဒါနျးတာတှဆေကျလုပျပေးရငျး ကူညီဖို့ စတငျအကူအညီတောငျးခံခဲ့သူကတဆငျ့ ဆှေးနှေးကွညျ့တော့ သူနထေိုငျခဲ့ရာ တဲလေးကို ဒီနသေ့နျ့ရှငျးရေးလေးသှားလုပျပေးနရေငျး လယျကှကျပိုငျရှငျက ထပျမထားနိငျတော့ကွောငျးးး တဲ့ကိုဖကျြလိုကျဖို့အကွောငျးးးပွောလာတယျ ဆိုတော့ ??????
ကိုဇငျမငျး ရဲ့ကံကွမ်မာ ဘယျလိုမြားထပျဖွဈလာဦးမလဲ?အတိတျကံကွောငျ့ပဲလားးး?ကံကွမ်မာရယျ ငွှိုးရကျလသေလားးးး? လောကကွီးထဲ လူသားတဈယောကျရှငျသနျဖို့ အတတျနိငျဆုံးကူညီဆောငျရှကျပေးနပေမေယျ့ ကံတရားးးက မကျြနှာသာမပေးသလိုအဖွဈ ! ဖွဈနိငျသမြှတော့ ရငျခုနျသံ ရှငျရေးကူညီမှုအသငျး အနနေဲ့ကူညီပေးနဦေးမှာပါ။ တကယျဆိုးရှားတဲ့ ဘဝအခွအေနတှေေ လောကထဲရှိနခေဲ့တာတှေ မွငျတှရေ့လေ ကိုယျ့အတှကျတော့ ကုသိုလျတရားးတှပေိုမိုလုပျဆောငျဖို့ တှနျးအားးးတှဖွေဈလပေဲလို့ သတိသံဝဂေလေးးတှနေဲ့ !!!!
ကံကောငျးတဲ့ အလှညျ့လေး ကိုဇငျမငျးအတှကျ ဖွဈပျေါလာနိငျပါစေ လို့ ဆုတောငျးပေးနမေိပါတယျ။ ခုဘဝ ဘာမှ မတျောစပျပမေယျ့ သံသရာမှာတော့ မတျောစပျဘူးတဲ့ ဆှမြေိုးဆိုတာမရှိနိငျဘူးးးးးတဲ့လေ။
ရငျခုနျသံ ရှငျရေးကူညီမှုအသငျး နှငျ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘှားစောငျ့ရှောကျရေး
စစ်သွေးနဲ့အတူတူ မန္တလေး Water Boom မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ရေဆော့ကစားနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဗီဒီယို
နာမည်ကြီးအေဝမ်းသင်္ကန်းတိုက်နေအိမ်ကို ဖောက်ထွင်းသွားတဲ့ သူခိုးပါဗျာ